Ao Amin’Ny Vaovao Sy Ao Amin’Ny Oniversite, Mijanona Ho Mpisolo Vaika Ny Akàlana Ireo Mpitsoaponenana Ao Libanona · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Elias Abou Jaoude, Joey Ayoub Nandika (fr) i Suzanne Lehn, Vero
Voadika ny 05 Febroary 2018 3:09 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Español, Türkçe, Português, 繁體中文, English
Tamin'ny 7 Oktobra, nampiseho an'ito sarinà lahy antitra misolo tena ny ‘Libaney’ voantsindrin'ny teny “Nafindra” ito ny fahitalavi-panjakana libaney ‘Télé Liban’.
Ny Alatsinainy 23 Oktobra, nikarakara fivoriana mitondra ny lohateny “Mpitsoaponenana: raharaha politika, fijery araka ny lalàna” ny oniversite Saint Joseph (USJ) ao Libanona, niaraka tamin'ny Biraon'ny Kaomisiona Avon'ny Firenena Mikambana misahana ny mpitsoaponenana (UNHCR).
Mametraka ny isan'ny mpitsoaponenana sirianina mitsoaka ny ady ho eo amin'ny iray tapitrisa mihaotra eo ny UNHCR tamin'ny Jona 2017. Manampy an'izay, eo amin'ny 450.000 mpitsoaponenana palestinianina, izay nitsoaka ny Nakba tamin'ny 1948 (‘Lozam amin'antambo’ amin'ny teny arabo), kanefa mihoatra ny Palestinianina 700.000 no nitsoaka na voaroaka hiala ny fonenany tamin'ny famoronana ny Firenen'i Israely.
Nifankahita teny ny mpandray anjara, mpanao politika, olon'ny oniversite sy tompon'andraikitran'ny Firenena Mikambana hiresahana ny zavamisy araka ny lalàna sy ara-pôlitika momba ireo mpitsoaponenana mipetraka ao Libanona, maro ireo mpanao politika, hoy ny olona teo avy ao amin'ny Global Voices, no nanararaotra ilay fotoana mba hanaratsiana ireo mpitsoaponenana fa tsy niresaka momba ny fomba hahafahana manampy ny mpitsoaponenana sy ny vondrona izay mampiantrano azy ireny.
Alexandra Tohme, mpandalina amin'ny fikarohana sy mpikatroka miasa ao amin'ny tobin'ny mpitsoaponenana ao Akkar, ao Avaratr'i Libanona, nitantara tamin'ny Global Voices hoe niteny toy izao ny minisitry ny Fitsarana teo aloha, Chakib Cortbaoui: “mijanona ao Libanona ny mpitsoaponenana satria mandray fanampiana iraisampirenena izy ireo”, nanindry fa “zava-misy” izany ary “tsy miteny afa-tsy ny marina” izy.
Niteny i Cortbaoui fa tsy tokony hamerina “zavamisy tany aloha niainan'ny palestinianina” i Libanona, amin'ny fanamarihana indray ny Palestinianina ho toy ny mpisolo vaika ny akàlana, izay tsy vaovao ao anatin'ny politika libaney.
Tsy ela fa vao tamin'ny Aogositra, namoaka teo amin'ny Instagram ny sarin'ny tobin'ny mpitsoaponenana palestinianina tao Aïn al-Hilweh tamin'ny taona 1960 ny Ministry ny Raharahambahiny libaney Gebran Bassil, vinanto lahin'ny filoha Michel Aoun. Niaraka tamin'ito hafatra ito ilay sary: ‘aza manaiky ny tobin'[ny mpitsoaponenana]’
Pikantsarin'ny sary navoakan'ny minisitry ny raharahambahiny libaney, Gebran Bassil, ny 24 Aogositra 2017 . Maribolana : Ny tobin'ny Aïn al-Hilweh tamin'ny voalohan'ny taona 1960… Ry Libaney, aza manaiky toby’. Loharano: Instagram
Fa tsy i Cortbaoui irery ihany no libaney tompon'andraikitra teo namerimberina an'izay. Teo koa i Khalil Gebara, mpanolotsaina ao amin'ny Ministeran'ny Atitany sy ny fiarahamonina eo an-toerana, izay tonga hatrany amin'ny fitenenana fa tsy tokony ho sokajiana ho mpitsoaponenana intsony ireo sirianina mpitsoaponenana, fa toy ny ‘mpifindramonina ara-toekarena’, satria “efa azo antoka nanomboka tamin'ny 2015″ ny sisintany sirianina-libaney.
Niezaka namaly ny ampahan'ny teny noentin'ireo manampahefana i Tohme : notanisainy ny fampihenana vao haingana ny fanampiana avy amin'ny Fandaharanasa Erantany momba ny sakafo izay mikitika fianakaviana sirianina marefo miisa 20.000 nanomboka tamin'ny 27 Novambra ary ny vokatr'izany ho azy ireo.
Tena marefo ireo fianakaviana fantatro fa voakitikin'ity fanapahankevitra ity : ratsy tanteraka ny toetran'ny tranolain-dry zareo (“fitobiana tsy ara-dalàna anaty tranolay”) : fepetra tsy mahasalama, hakiviana, miaina ao anatin'ny loza sy ny tahotra, tsy an'asa, tsy misy fivezivezena na fahafahana mivoaka ivelan'ireo hopitaly, asa, sekoly, tsy nianatra nandritra telo na efatra taona ny ankizy, tsy misy fitsaboana afa-tsy fitsidihana ara-pahasalamana iray monja isam-bolana.
Nanindry anio toejavatra io i Tohme mba hamaliana ny tenin'i Cortbaoui amin'ny fanontaniana:
Ahoana no hitenenantsika fa handray ny fanampian'ny fikambanana iraisampirenena no mahatonga azy ireo ho eo nefa betsaka amin'izy ireo no tsy mahazo na inona na inona akory avy amin'izany?
Navoakany avy eo ny fanaovana fahirano ny Ghouta atsinanana any akaikin'i Damas ao Siria ary nanontaniany hoe ahoana ny olona mitsoaka an'ireo herisetra ireo no ho antsoina hoe “mpifindra monina ara-toekarena” kanefa hita izao izy ireo fa “olona mitsoka fanenjehana sy herisetra mahery vaika” tena eo akaikin'ny sisintany libaney (elanelana 50 kilaometatra avy eo no misy an'i Damas).
Vita fahiranon'ny tafiky ny governemanta ny hany sisan'ny mpikomin'i Ghoula atsinanana nanomboka tamin'ny 2013. Nahafatesana miisa 200 eo ho eo, izay ankizy 47 taminy, ny daroka baomba farany nanomboka ny novambra 2017, araky ny Fanarahamaso sirianina momba ny zon'olombelona.
Izay nitondra an'i Tohme hamaly ny tenin'i Gebara hoe azo antoka ny sisintany sirianina nanomboka tamin'ny 2015 miaraka amin'ny ohatra herisetra mahery vaika tao Hama, Homs, Damas sy Dera'a, ireo rehetra ireo amin'ny halavirana antonony miala amin'ny sisintany libaney.
Mpisolo vaika ny akàlana mora raisina ho an'ny fampahalalambaovao
Tsy mahita ohatra tsara afa-tsy ny sary avy ao amin'ny fahitalavi-panjakana libaney ‘Télé liban’ (naverina navoaka ato anatin'ity lahatsoratra ity) ny fijery ireo mpitsoaponenana any anatin'ny fampahalalambaovao libaney.
Rangahy antitra manao akanjo nentimpaharazana miaraka amin'ny ‘tarbosy’ (fanaronana ny loha nentimpaharazana avy amin'ny vanimpotoana ottoman, mitovy amin'ny fezy marokanina) voatsindrin'ny lanjan'ny teny hoe “nafindra” (النازحين), mifanohitra amin'ny teny hoe mpitsoaponenana (اللاجئين). Eo ambonin'ilay lehilahy, ny hafatra Vonjeo…. tsy tantiko intsony !!!’
Fanebahana tsy niniana, afaka hoentin'ny Palestinianina sy Sirianina amin'izao fotoana izao koa ny tarbosy, satria efa teo talohan'ny fiforonanan'ny Firenena-fanjakana [tamin'ny fidarabohan'ny firenena ottoman] izy io.
Nanomboka ny 6 May 2015 no tsy naneken'ny governemanta libaney ny hanoratra intsony ireo Sirianina ho toy ny mpitsoaponenana, miaraka aminà fitakiana ara-pitantànana tahaky ny fandoavana ny mitovy amin'ny 200 dolara Amerikanina ho an'ny fahazoandalàna hipetrahana isantaona ary ny filàna ny taratasy sirianina. Niteny ny Kaomity norvezianina misahana ny mpitsoaponenana fa “hatramin'ny 80% no tsy manana fahazoandalàna hipetrahana ara-dalàna”.
Ny ankamaroan'ny mpitsoaponenana nanontanian'ny Oxfam tamin'ny May 2017 niteny fa tsy mihevitra ny hijanona afa-tsy andro sy volana vitsivitsy.
Nanazava ny Kaomity norvezianina misahana ny mpitsoaponenana:
Raha tsy misy fahazoandàlana hipetrahana, mahatsiaro tsy fandriampahalemana ny olona. Mety ho tratran'ny lamandy, fisamborana, fidirana am-ponja ary koa didy fandroahana. Ny tahotra ny ho voasambotra ary hogadraina dia manery ireo sirianina maro mpitsoaponenana hametra ny fivezivezeny ary mankany amin'ny alaolana tsy fidiny mba hivelomana.
Na dia voamarina aza ny olan'ireo sirianina mpitsoaponenana, ny famadihana azy ireo amin'ny fomba ofisialy ho mpisolo vaika ny akàlana, miaraka amin'ny fanampian'ny gazety nentimpaharazana, dia nanampy ny fanelezana kabary iray mankahala mpitsoaponenana ao Libanona iray manontolo, miaraka amin'ny olana miamafy hatrany.
Tamin'ny oktobra 2017, nanao hetsika mitondra ny anarana hoe “Famoriambahoaka mitaky ny fiverenan'ireoy sirianina nafindra any amin'ny fireneny ” ny Antokon'i Libanona, antoko izay miteny fa miantehitra amin'ny “tanora libaney”.
Amin'ny toerana sasany, nivadika ho hetsika ny teny rehefa nomen'ny kaominina baiko niaraka tamin'ny didy fandroahana ireo Sirianina rehetra mba hiala, nitondra ny ankamaroany hitsoaka.